Chii Chinokonzera Kuti Nhengo Yababa Ipere Simba Nguva Dze Bonde? - HealthTimes
Nhengo Isiina simba
WAKAMBOTI here uripakati pekujaiva kukambo kaunodisisa mubhahwa magetsi obva angodzima. Zvinosvota sei? Izvozvo ndozvinonzwa vana mai vakawanda mudzimba umu kana chombo chababa chapera simba nguva dzekuti vanga vachifanira kufamba nebhora.
Kupera simba kwennhengo yababa kana kuti Erectile Dysfunction (ED) kunoitika kana murume kana kuti baba vatadza kuti nhengo yavo irambe yakamira zvinokonzera kuti mese murume nemukadzi musare mune nzara.
Dambudziko iri re Erectile Dysfuntion rinowedzerawo ne zvikamu makumi maviri (22%) kuvarume vari pamusoro pe makore makumi matanahtu (60) huye makumi matatu kuvarume vane makore makumi masere (70). Izvi hazvirevi kuti murume wese ari pamakore awa anosangan ne dambudziko iri kwete.
Mutsvakurudzo dzakaitwa ne Chikoro chezvidzidzo zvepamusoro che Texas A&M University ku America dzinoratidza kuti Kupera simba kwenhengo yababa kunonyanya kukonzerwa nezvirwere zvinogona zvakahwanda mumuviri anonzi iwo ma underlying physical or psychological conditions. Izvi zvonogona kureva zvakare kuti kunyange murume ane makore Mashona kune ataurwa ayo anogona kusangana nedambudziko iri.
Tsvakurudzo idzi dzakatarisa kuti ndezvipi zvimwe zvinogona kukonzeresa Erectile Dysfancution kana kuti kupera simba kwenhengo yababa. Hezvinoi zvimwe zvikonzero zvishanu zvinogona kuti simba ripere zvakaonekwa ne Texas University A&M.
Zvirwere (Medical Conditions)
Zvirwere zvakafanana ne chirwere chemoyo zvinogona izvo kuva mviro-mviro dzekupera simba kwenhengo yemurume. Vanamazvikokota vezvehutano vakaona ivo kuti kazhinji zvinhu zvinokonzera chirwere chemoyo ndizvo zvakare zvinogona kunokonzera kupera simba kwehengo yababa. Kune vaya vane zvirwere zvemoyo, zviratidzo zvekupera simba kwenhengo zvinogona kuratidzika vachiri vadiki nekuti ropa rinenge richivhringidzika kufamba zvakanaka mutsinga dzemuviri.
Dambudziko re Atherosclerosis rinova iro kubatana kwemukati mestinga mumuviri wemunhu zvakaonekwa kuti ndozvinokonzera kupera simba kwenhengo zvakare imviro mviro dze stroke. Nekuti nguva yebonde ropa rinomhanya zvakanyanya mumuviri, kana murume ane dambudziko rekuti ropa harisi kufamba zvakanaka, ropa rinosvika kutsinga dzenhengo rinitawo shoma zvinova zvinopedza simba. Zimwe zvezvirwere zvinogona kukonzera kuti mushini wababa upere simba zvirwere zvakaita se Shuga kana kuti diabetes, zvirwere zveitvso (chronic kidney disease) nezvimwe zvakadaro.
Une mushonga wauri kutora here yawakanzi nachiremba utore kana kuti yawakatenga wega mu pharmacy? Kune imwe mishonga inogona kukonzera kuti nhengo yababa ipere simba yakafanana nemapiritsi ekutsvagisa hope kana kuti usasurukirwe (antidepressants), mishonga ye Blood Pressure kana kuti BP neimwewo mishonga. Kunyange mishonga iyi ichirapa zvirwere nemamwe matambudziko emumuviri, inogona kuvhiringana ne mahomornes emuviri huye nekufamab kweropa zvinova izvo zvinokonzera kuti nhengo yababa ipere simba.
Kushushikana Mupfungwa (Emotional Distress)
Kushushikana mupfungwa kunogona kukonzera kuti nhengo yababa ipere simba. Kunetsana nemudiwa wako kunogona kuti ushushikane zvekutadza kana kuti nhengo isimuke. Kune mhando dzekushushikana mupfungwa dzakasiyana siyana. Kunetseka mufpungwa (Depression), Kufunganya (anxiety), Kuzvitarisira pasi (low self-esteem), Kunzwa kuzvipa mhosva (guilt) zvakare nekutya kukundikana pabonde kunogona kutadzisa kuti nhengo imire kwenguva refu.
Mararamiro (Lifestyle Choices)
Sarudzo dzezvekudya, kumwa kana mararamiro chaiwo dzinogona kuvhiringa mashandiro anoita nhengo panguva dzebonde. Varume vadhafu kana kuti vari Overwight, vanoputa fodya zvikuru, Vanomwa doro zvmandiriri huye vanoshandisa zvinodhaka nemwero usiri iwo vanogona kusangana nedambudziko rekupera simba kwenhengo. Kudya michero kunogona kubatsira varume kuti vasapindana ne tsekwende iyi yekupera simba. Kudya michero ine zvinonzi maflavnoids semichero inonzi ma blueberry kunogona kuita kuti varume vasanyanye kuputa fodya, vamwe doro shoma zvakare vafarire kuita maexecise.
Kukuvara (Body Injury)
Kunyange zvakakosha kuita ma execise, ngwarira kuzvikuvadza kuzasi kwemuviri wako sezvo kukuvara kubva muchuino zvichidzika kunogona kukonzeresa kupera simba kwe nhengo yemurume.
Tsvakurudzo dzakabuda mu Journal for Men’s Health dzinoratidza kuti hapana hukama pakati pekuchovha bhasikoro ne kupera simba kwenhengo yababa. Kuchovha bhasikoro hakukonzeresi kupera simba kwenhengo.
Dambudziko rekupera kwesimba ratekeshera pasi rese. Kunyika ye America muna 2016, zvakabuda izvi kuti varume mamiriyoni makumi matatu vaisangana nedambudziko iri huye zvirikunzi mugore ra 2025, varume mamiriyoni mazana matatu (320 million) vachange vava nedambudzikorekupera simba kwenhengo yababa.
Zvakakosha kuti varume vagare vachiita maexecise kuti vagare vakasimba. Ukaona nhengo ichipfava nguva dzebonde, chimbotarira zvikonzero zviri pamusoro apo kana kuti kuona chiremba.
BREAKING NEWS, Health News, HealthTimes Vernacularerectile dysfuntion, Kupera Simba